Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPod aan iyo Lugood
Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPod leh ama aan lahayn Lugood
Waxaan haystaa 1500 heeso on my Sansa. Sababtan awgeed qaar ka mid ah, 959 oo keliya heeso lagu wareejiyay Lugood iyo 741 oo kaliya ka dhigay in iPod ah. Sidee iPod waan samayn karaa mar kale iyo in la hubiyo heesaha oo dhan waxaa lagu wareejiyay Lugood, ka dibna? Sidoo kale, waa ay jiraan in si ka dhakhso inaad tan sameyso, waxaana suurto gal aan Lugood ama aan jiidayeen 4 mar?
iPod waa ciyaaryahan music fiican ee dadka jecel inay dhegeysato muusikada halka shaqada, waxbarashada, ama safraya. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar, waa in codsiyo saaray MP3 songs on iPod. Sida user ee kor ku xusan, mararka qaar waxaad kuma wareejin karaan oo dhan MP3 heeso aad iPod la Lugood. Mararka qaarkood, waxa ay qaadataa waqti dheer si aad u dhigay MP3 in iPod marka Lugood Library yahay dhar weyn. In this article, habab kala wareejinta MP3 in iPod leh ama aan lahayn Lugood lagu daboolay. Dooro mid ka mid ah aad u baahan tahay:
Xalka 1. nidaameed MP3 in iPod la Lugood
Xalka MP3 2. Transfer in iPod la Wondeshare TunesGo
Xalka MP3 3. Nuqul in iPod la MediaMonkey
Lugood waa aalad default in Apple ayaa la siiyaa si ay u saaray MP3 in iPod ah. Haddii aad rabto in lagu wareejiyo MP3 in iPod la Lugood aad, waa inaad marka hore u cusbooneysiin Lugood si aad u version ugu dambeeyay. Waxaad sidoo kale ka eegi kartaa version cusub ee Lugood ama kala soo bixi version ugu danbeeyay ee goobta rasmiga ah ee Apple. Next, raac tallaabooyinka hoose.
Orod Lugood on your computer. Guji ku File menu in Lugood> dooro dar File inay Library ama dar Folder inay Library in aad ku darto oo aad MP3 heesahaaga Lugood Library.
Guji ku View menu in Lugood> dooro Show galeeysid . Connect aad iPod la your computer via cable USB ah. Marka xiran, aad iPod apear doonaa AALADAHA galeeysid ah.
Riix si aad iPod galeeysid ah. Markaas riix Music tab uu furmo suuqa dhinacaaga midig. Laga soo bilaabo halkan, hubi nidaameed Music . Next, waa in aad xulan heeso iyo Riix codso in ay ku riday MP3 aad iPod.
1. howlgal adag
2. kuma wareejin karaan music qaar ka mid ah (Lugood ma taageeri qaabab qaar ka mid ah)
Xalka 2. Transfer MP3 in iPod la Wondeshare TunesGo (Windows & Mac)
Habka ugu fiican ee loogu talagalay wareejinta MP3 in iPod aan Lugood waa in la helo iPod qalab kala iibsiga xirfad caawimaad. Halkii ay ka soo jeediyay aad raadiso noocan oo kale ah aalad ay maxkamad iyo qalad, waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan waxaan jeclaan - TunesGo Wondershare. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala iPod si ay u gudbiyaan files dhexeeya computer iyo iPod.
Bedelka MP3 in iPod aan la isticmaalayo Lugood syncing;
Ku qor wax MP3 song in iPod kasta oo aan erading aad iPod;
IPod Samee drive la qaadan karo ay adag tahay in kaydka MP3 songs,
Bedelka MP3 songs dib si aad u computer iyo Lugood Library;
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan MP3 in iPod la TunesGo Wondershare
Tallaabada 1 Ku rakib TunesGo Wondershare
Click Download hoose si aad u dejisan version saxda ah ee Wondershare TunesGo sida uu nidaamka qalliinka computer aad. Ka dibna loo soo dajiyo iyo waxa maamula on your computer. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod la your computer. Marka Wondershare TunesGo ogaadaa aad iPod, waxay muujiyaan doonaa iPod in ay suuqa kala weyn.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo (version Windows) hadda taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee iPods. Hubi iPods taageeray. Wondershare TunesGo (Mac) hadda si buuxda u taageersan tahay oo kaliya 4aad iyo 5aad ee jiilka iPod taabashada (iTouch) oo waa in ay macruufka 5, macruufka 6, iyo macruufka 7.
Tallaabada 2 Transfer MP3 in iPod aan Lugood
Guji ku Media button galeeysid ah. Markaas tahay in aad awoodid in aad aragto in aad keentay in uu furmo maamulka music ah. Laga soo bilaabo halkan, guji saddexagalka hoos badhanka Add . Riix saddexagalka in ay doortaan dar File ama dar Folder . Haddii aad la soo ururiyay oo dhan MP3 heesaha oo aad u socoto si ay u iPod, adigoo gujinaya dar Folder , heesaha oo dhan waa laydiinku dari doonaa iPod ee labaad ah. Ama guji Add File soo qaado MP3 heeso ka ururinta music aad. Ka dib markii in, habka wareejinta bilaabmaa oo onlye qaadataa labaad dhammayn.
1. qalliin fudud
2. wareejiyo oo dhan music (TunesGo badalo karaa qaabab music ah (in Lugood ma taageeri jirin) si mp3 (Lugood taageertaa) automaticlly
3. dheregtay ID3 tags iyo Album Arts automaticlly
Xalka 3. Nuqul MP3 in iPod la MediaMonkey (Windows)
Waxaan ka heli mid in badan oo dadka isticmaala iPod ha isticmaalin Lugood si ay u maareeyaan songs, laakiin ciyaaryahan warbaahinta caanka ah. Mid ka mid ah moste ah si weyn loo isticmaalo media player waa MediaMonkey. Dhab ahaantii, waxaa u shaqeeya in ka badan tababare warbaahinta iyo ciyaaryahanka, laakiin kala iibsiga iPod ah. Waxay awood u isticmaala inay nuqul ka MP3 heesahaaga iPod. Marka aad iPod xirmaan your computer via cable USB ah, MediaMonkey akhriyi doonaa xogta ku saabsan iPod. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay tagaan Tools dooro nidaameed Devices . Laga soo bilaabo liiska hoos-hoos u, xulo iPod u dhigay MP3 aad iPod. Baro wax badan oo ku saabsan MediaMonkey >>
Top 10 Lugood bedelo
Sida loo dar Playlists ka Lugood in iPod
Sidee si ay u gudbiyaan Songs ka Computer si ay iPod
Easy Siyaabaha Bedelka Music ka Lugood in iPod
Sida loo dar Songs si iPhone aan Lugood
Sida loo Copy Songs ka iPod in Computer
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod taabto si Lugood
Free iPod in Computer freeware aad u baahan tahay
Sidee si ay u gudbiyaan MP3 ka iPod in Computer
Tallaabooyinka lagu dooxi Music ka iPod in Computer
Biyaha Waxyeello iPod taaban! Sidee inuu ka soo kabsado Data Waxaa ka
> Resource > iPod > Sidee si ay u gudbiyaan MP3 in iPod leh ama aan lahayn Lugood